Iingcebiso zokuphucula ukusebenza kwakho njengomyili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcebiso zokuphucula ukusebenza kwakho njengomyili
UJorge Neira | | Idizayini yeMifanekiso
Njengoyili, ngokuqinisekileyo sele udlulile kuloo mzuzu apho uphelele khona ijolise ekwenzeni iprojekthi kwaye ugqiba "ukutsiba" isidlo okanye mhlawumbi ubeke endaweni yesonka okanye ikofu, kuba iyakhawuleza kwaye awuchithi xesha usebenza. Nokuba yeyiphi na indlela, njengoko ixesha lihamba, ukutsiba izidlo okanye ukufaka endaweni yezinto ezingenampilo kugcina kuchaphazela kwaye ukulalanisa ukusebenza kwakho endaweni yokukunceda.
Ukucinga ngako, siza kukunika iingcebiso ezingayi kukunceda ekuphuculeni ukusebenza kwakho xa usenza eyakho Ndisebenza njengomyili, kodwa ikwayimini yakho yemihla ngemihla.
Ezi ngcebiso ozifunayo ukuphucula ukusebenza kwakho
1 Ukutyela ukugxila okungaphezulu
2 Umthamo ophakanyisiweyo wecaffeine
3 Iivithamini kwimpilo yamehlo
4 Ukutya ukuphucula impilo ngokudibeneyo
Ukutyela ukugxila okungaphezulu
Ukutsiba isidlo kunokuba neziphumo, njengokuchaphazela kwakho ukusebenza kwengqondo ngenxa yokusilela kweglucose, ethi ibangele ukudinwa okukhulu kwengqondo.
Ngesi sizathu kwaye ngokwengcali yezondlo, kungcono ukutya izidlo ezihlanu ngosuku, rhoqo kwiiyure ezintathu ngaphandle kokutsiba. Ukuba nethuba lokukhetha phakathi kweziqhamo, imifuno kunye neenkozo ezipheleleyo, kuba le yeyona mithombo ilungileyo yeswekile.
Umthamo ophakanyisiweyo wecaffeine
Ikomityi ene-180ml yekofu inokuba ne-20-150mg ye-caffeine, kuxhomekeke kwindlela eyenziwe ngayo. Ngokufanayo, iziselo ezihlaziyiweyo ezibonelelweyo Ngeemveliso ezahlukeneyo, kwi-360 ml zihlala ziphakathi kwe-23-71mg ye-caffeine.
La Ucebise ngethofi ye-caffeine Kubantu abadala abasempilweni, kuphakathi kwama-400-450mg yonke imihla. Ke olona cetyiso luphakathi kwe-3-4 iikomityi zekofu.
Iivithamini kwimpilo yamehlo
Phantse nantoni na eyenza umsebenzi woyilo ifuna umbono wabo.
Nangona kunjalo, njengokuba sikhula, kuba ngumzimba kunzima ngakumbi ukuvuselela iiseli, ezinokuthi zibeke esichengeni impilo yamehlo, ngaphezu kokuchaphazela umgangatho wombono.
Nangona kunjalo, ngokutya ukutya okusempilweni, kunokwenzeka ukuba kulibazise oku kulahleka komgangatho kwaye ukunciphisa umngcipheko kukhokelela kuphuhliso lweempawu zamehlo ezomileyo, cataract kunye nokudodobala okunxulumene nobudala be-macular ekwabizwa ngokuba yi-AMD.
Isisombululo kukutya iiminerali, iivithamini antioxidant, omega-3 kunye nezinc, ke kule ngqondo, isakhi sevithamini esifanelekileyo sinokukunceda kakhulu.
Ukutya ukuphucula impilo ngokudibeneyo
Kuchanekile yomeleza umzimba ukulungisa ukuma, kuba iidiski ze-herniated kunye ne-osteoarthritis zivelisa iintlungu ezinkulu ezingahambisi "neoyile". Ngale ndlela, abaqulunqi baphuma baba liqela lomngcipheko, kuba bahlala besenza iintshukumo ezingalunganga.
Ngesi sizathu, kulungile ukuboleka i ukhathalelo lomzimba olufanelekileyo, ukuyikhathalela kunye nokuyinceda ngokutya ukutya okuthile okuhle kakhulu ekuphuculeni impilo yezihlunu kunye namalungu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iingcebiso zokuphucula ukusebenza kwakho njengomyili
Kutheni le nto ukwazisa okusebenzisanayo okulula, okucacileyo nokunomdla?
Ezinye izitudiyo zoopopayi ezifanelekileyo ukuba zikwazi